Iyadoo lataliye ka ah Naadiga Macallimiinta Mareykanka Future, Macalinka Worthington HS Patrick Mahoney wuxuu taageeraa oo ku dhiirigeliyaa ardayda xiiseynaya xirfad shaqo. Sawirada amaahda: Ric Stewart, Rickers Studio Studio
Caawinaad La Doonayo: Kala Duwanaanta, Macalimiin Waxtarka leh ee Fasaladda Beddelaya
Greater Minnesota waxay la kulmaan macalimiin kala duwan si ay u baraan jiilka soo socda ee shaqaalaha iyo hoggaamiyeyaasha. Halkan waa sida ay bulshadu u adeegsanayso hal abuurka, iskaashiga, iyo codadka bulshada si ay ula kulmaan caqabadan.
Inkasta oo magaalooyin badan oo yaryar ay la halgamayaan duulimaadka qaangaarka iyo qoyskooda, rugta xaafadda beeraha Worthington (pop 13,000) ayaa ka soo baxday habab aad u firfircoon. Sanadihii 1980-yadii, muhaajiriinta ayaa ku soo qulqulaya beelaha buuraleyda ah ee ku yaala geeska koonfur-galbeed ee Minnesota, kuwaas oo ay u suurtogashay in ay shaqooyin ka helaan warshad hilib ah iyo beero iyo hadhuudh. Qaar badan oo ka mid ah dadka dhowaan yimid waxay joogeen, bilaabeen ganacsiyada, oo ay ku dhejiyeen beenta bulshada dhexdeeda. Hawlahaas, waxay dib u soo nooleeyeen magaalada Main Street iyagoo dukaamo cusub, buuxiyay cusbitaallada kaniisadda, waxayna ku biireen saldhigga dakhliga.
Bandhigga Caalamiga ah ee Worthington oo sanadle ah ayaa lagu xusaa dhaqamada kala duwan ee aagga iyo sida ay ugu darsadeen muhiimadda magaalada. Sawirka Sawirka: Jose Lamas oo ka wakiil ah Worthington International Festival
Maanta, in ka badan 78 boqolkiiba qiyaastii 3,200 oo dugsi oo ku yaal Worthington waa ardayda midab. Waxay ku hadlaan in ka badan 40 luuqadood oo guriga ah, qiyaasta seddexaadna waa bartayaasha luuqada Ingriiska. Maaddaama ay dadku iskuulku noqdaan kuwo kala duwan oo dhaqan iyo luuqad ahaanba ah, degmadu waxay la soo baxdaa khadad kale: badi shaqaale barayaal cad, oo intooda badani ka tagay goobta ama ujeedada ugu weyn ee hawlgabka. Isku-dubariddan xoogga ah ee dadweynaha, oo ay weheliso caqabad joogta ah oo lala yeesho qorista meelaha miyiga ah, ayaa horseeday macallin yaraanta.
Worthington kaliya maahan. A dhawaan warbixinta Wilder Foundation wuxuu muujiyey in ku dhawaad 42 boqolkiiba degmo dugsiyeedyada Minnesota ay soo sheegeen in macallimiin yaraanta ay tahay dhibaato weyn oo 6 boqolkiiba oo keliya ay muujiyeen inaysan iyagu dhibaato ku ahayn iyaga. Iyo meelaha miyiga ah ee gobolka, degmooyinka waxay soo sheegaan in ay adagtahay qorista iyo haynta macallimiin aqoon leh, gaar ahaan macallimiinta midabka leh. Seddex meelood meel ardayda Minnesota waxay ka soo jeedaan bulshooyinka midabka, marka la barbar dhigo in ka badan 4 boqolkiiba macallimiinta gobolka.
Daraasado farabadan tusi in ardayda asalka jinsiyadeed ay faa'iido u leeyihiin marka macalimiintoodu ay ka turjumaan kala duwanaanta fasallada. Macallimiinta midabkoodu gaar ahaan waxay ka caawiyaan hagaajinta barashada iyo waxqabadka akadeemiyadda ee ardayda midabka leh. Sida laga soo xigtay warbixintii dhawaan ka soo baxday Machadka Siyaasadda Waxbarashada, saameynta waxaa ka mid ah dhibcaha imtixaanka sare iyo xisaabta, heerka qalin jabinta, iyo heerarka hoose ee maqnaanshaha. Ardayda midabada leh iyo kuwa cadaanka ah waxay sidoo kale soo sheegaan in ay dareemayaan aragti wanaagsan ee macallimiinta midabka, oo ay ka mid tahay dareenka xanaanada iyo tacliinta.
Isha: 2019 Bixiyaha Macalinka iyo Macalinka Minnesota ee Labaadlaha ah laga soo bilaabo Wilder Research
Iskaashiga Jidka New Teacher Pathway
Dugsiga Worthington ee degmada, hoggaamiyeyaasha bulshada ayaa bilaabay dadaal isku dhaf ah oo lagu baddalayo macallimiin yaraanta, iyada oo gacan ka helaysa dad badan oo ka wada shaqeeya.
"Minnesota waxay ubaahan tahay macallimiin kala duwan iyo jidad wanaagsan oo iyaga loogu talagalay - dadaalkani waxa uu muujinayaa in dugsiyada degmooyinka ugu fiican ee wada fikirka ah ay wada shaqeyn karaan si ay si wanaagsan ugu diyaariyaan ardaydooda dhaqaale caalami ah." -LANDRIGA LANDESMAN, SIDA LAGU QAADO
Sanadka 2018, Ururka Hirdan ee Southwest (Initiative Foundation), oo leh a qorshaynta deeqda McKnight, wuxuu bilaabay inuu isku dayo wada-hadalka dhexmara degmada dugsi ee Worthington, Minnesota West Community College iyo College Technical College, iyo Jaamacadda Koofurta Gobolka Minnesota (qiyaastii 70 mayl ka baxsan Worthington). Sannadkan, oo leh $ 600,000 oo deeq ka badan laba sano oo ka timid McKnight, Foundation wuxuu taageeri doonaa Iskaashiga Isku-dubaridka Macallinka Koonfur-Galbeed ee Minnesota si loo hirgeliyo waddo yar oo qiimo-ku-ool ah oo lagu barayo ardayda dhigata dugsiyada sare ee Worthington iyo shaqaalaha kalkaaliyayaasha. Ka qaybgalayaashu waxay lahaan doonaan fursado ay ku dhammaystiraan dhammaan koorsooyinkooda si ay ugu kasbadaan dhibcaha xagga waxbarashada iyada oo aan laga tegin Worthington.
"Minnesota waxay ubaahan tahay macallimiin kala duwan iyo jidad wanaagsan oo iyaga loogu talagalay - dadaalkani waxay muujinayaan in dugsiyada degmooyinka ugu muhiimsan ay ka wada shaqeyn karaan si ay si wanaagsan ugu diyaariyaan ardaydooda dhaqaale caalami ah," ayuu yiri Debby Landesman, madaxa guddiga madaxa banaan ee McKnight Foundation.
Xubnaha wadashaqeyntu waxay ka shaqeynayaan in ay kuqoraan sinnaanta dugsiyada oo dhan oo ay ka mid yihiin tababarrada hadda macallimiinta iyo macallimiinta habka ay xoojisay Aqoonsiga Kala Duwanaanta Kala duwanaanshaha Dhaqannada (IDI), qalab balaadhan oo loo adeegsado warshado badan si loo qiimeeyo aqoonta dhaqan ahaaneed. Waxay sidoo kale samayn doonaan guddi talo bixin bulsho oo ay ku jiraan codadka barayaasha, qoysaska, iyo deganayaasha si loo hubiyo in aragtida Worthington ee jinsiga iyo dhaqanka kala duwan ee bulshada ay ka caawiso qaabeynta barnaamijka horey u socdo.
Perla Banegas waxay bartaa bartayaasha luuqada Ingiriisiga ee Worthington High School. Banegas sidoo kale waa la taliye macallimiinta mustaqbalka ee American Club. Sawirada amaahda: Ric Stewart, Rickers Studio Studio.
"Wadashaqeyntu waa fursad ay dad ku hoggaamiso waddo xirfad leh oo bixin doonta fursado badan oo kasbashada qoysaska, wax ka qabashada macallin la'aanta bulshooyinka reer miyiga ah, oo ay saameyn ku yeeshaan ardayda ugu dambeyntii u arkaan in ay ka muuqato horteeda fasalka, "ayaa uu yiri Nancy Fasching, oo ah agaasimaha saameynta bulshada ee Xarunta Southwest Initiative Foundation. "Wada-hawlgalayaasha oo idil ayaa u go'an in ay tani dhacdo."
"Waxaan aragnaa waxa isbeddelkani ka dhigi doono nolosha ardayda iyo barayaasha mustaqbalka," ayay tiri. "Waa ay ka weyntahay dhammaanteen, waxaanan eegnaa muddada dheer."
Mashruuca McKnight Foundation, waxaan aqoonsannahay in maalgelinta ardayda Minnesota ay xoojiso awooddeena muddada fog ee gobolka ee dhaqaalaha iyo madaniga. Taasi waa sababta aan u taageerno kuwa ka shaqeynaya inay xakameeyaan fursadaha dawlad-goboleedkeenna iyaga oo kor u qaadaya siyaasadaha iyo ficillada u siman.
Mashruuca McKnight ee 2019-ka deeq-lacageedka, guddiga ayaa ku deeqay 121 deeqo ah $ 19.9 milyan. Tani waxaa ka mid ah $ 1.2 milyan oo doolar oo loogu talagalay dadka ku nool waxbarashada - gaar ahaan kuwa ka shaqeynaya sidii ay qoysaska ula qabsan lahaayeen una barbaarin lahaayeen barayaasha waxtarka leh. Liiska buuxa ee deeqaha la aqbalay ayaa laga helayaa noo keydka macluumaadka.
Marka laga soo tago taageeridda Iskaashiga Diyaarinta Waxbarashada Koonfur-Galbeed ee Minnesota, McKnight wuxuu siiyay deeqda Amherst H. Wilder Foundation barnaamijka Latino Programme. Barnaamijka lix-usbuuca ee Isbanishka wuxuu uqalaa ka qaybgalayaasha xirfadaha hoggaaminta, waxay dhistaa kalsooni, waxayna ka taageertaa inay wax ka bedelaan bulshadooda.
McKnight ayaa sidoo kale deeq u siiyay Magaalooyinka Greater Twin United Road si ay u taageeraan hindisaha u horseedaya ardayda inay ku shaqeeyaan shaqooyinka qoyska oo ay yareynayaan deyntooda waxbarasho. Hindisaha waxaa ka mid ah waddooyinka diiradda saara shaqooyinka xirfadaha, gaar ahaan cirqiga, luuqada, iyo dhaqanka kala duwan ee kala duwan, taas oo ah nooca danaha gaarka ah.
Si wadajir ah ula shaqeeya shurakadaa, iyo dhammaan wada-hawlgaladayada barnaamijka waxbarashada, waxaan higsaneynaa inaan u diyaarino ardayda Minnesota inay ku guuleystaan bulshada adduunka oo sii kordheysa.